Magangalyo doonka waa in la siiyaa xaquuq caafimaad | Somaliska
Magangalyo doonka iyo dadka sharci darada ku jooga Sweden waa in la siiyaa xuquuq caafimaad oo la mid ah dadka kale, sidaas waxaa soo bandhigay gudi ay dowlada u saartay in ay baaritaan ku sameeyaan arintaan.
“Aad ayay muhiim u tahay in caafimaadka lagu bixiyo si siman. Qofkasta waxa uu xaq leeyahay daryeel. Waa in aysan ku xirnaan warqada aad haysato” sidaas waxaa yiri wasiirka arimaha bulshada Göran Hägglund.
Waqtiga hada la joogo dadka aan sharciga ku lahayn Sweden waxay xaq u leeyihiin in markii xaalad deg deg ah jirto oo keliya ay daryeel caafimaad helaan.
Sanad ka badan ayay gudi baaritaan ku hayeen arintaan iyagoo maanta soo bandhigaya in xaq loo siiyo dadka aan sharciga lahayn daryeel caafimaad oo dadka la mida. Xitaa dadka diidmada la siiyay ayaa ku jira.
Dhinaca daryeelka ilkaha ayaa caruurta dadka aan sharciga lahayn waxaa xaq loo siinayaa daryeelka ilkaha oo bilaash ah. balse dadka waaweyn ayaan heli doonin taas.
Arintaan ayaa ahayd mid xisbiyada ku kala qaybsanyihiin, iyadoo inta badan xisbiyada ku jira xulufada dowlada marka laga reebo Moderaterna ay taageersanaayeen arintaan. Ka dib heshiiskii ay dowlada la gaartay xisbiga Miljöpartiet ayaa lagu heshiiyay in dadka sharci la,aanta ah la siiyo daryeel caafimaad oo dadka la mid ah.
Jimacaale aad ayaad u mahadsantahay sida hal haleelka ah oo ay wararkaadu iskaga soo daba dhacayaan taageerada aad codsateena waa mid u qalanta xaqiiqdii waxa aad qabaneesaan wayao labadaan war oo ugu danbeeyay waxaa u dhaxeey ayaa ahaa xili aad u koobaan oo aanan hal kursi ka kicin, marka waxaa la dhihi kara somaliska waa ileys qarax ah oo u soo baxay ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan sweden. sidaa iyo si la mid au sii wada hoosha , w-c-w-w – mahadsanidiin